Valiny amin'ny andiany Finoana sy Siansa - Raby Michael Avraham
Valiny amin'ny andiany Finoana sy Siansa
Responsa > Sokajy : Finoana > Valiny amin'ny andiany Finoana sy Siansa
P. Nanontany 4 taona lasa izay
Shalom Harav ao anatin'ny tontolon'ny andian-dahatsoratra momba ny siansa sy ny finoana izay nosoratan'ny rabyynet Nampiasa ny raby Amin'ny fijery fizika-teolojia
Nanontany azy aho: Raha ny fahalalako azy dia misy fisalasalana ao amin'io porofo io, satria ny resaka momba ny antony voalohany dia resaka momba ny toe-javatra iray alohan'ny zava-misy ary ity toe-javatra ity dia tsy miompana amin'ny maha-ara-dalàna ny zava-misy eto amintsika. Azoko fa tsy porofo izany
Tiako ny valiny misaotra.
Michi Staff Namaly 4 taona lasa izay
Raha azoko tsara ny fanontanianao dia manontany tena ianao hoe inona no fototry ny fiheverana fa marina ny foto-kevitry ny causality izay marina amin'ny zava-misy iainantsika, na dia talohan'ny namoronana izao tontolo izao aza (fa tamin'ny heriny no nanaporofoana fa noforonin'ny sasany izy io. antony). Ny valinteniko dia ny fitsipiky ny causality dia tsy tokony ho sehatra ara-potoana, fa angamba amin'ny karazana zavatra. Ny zavatra fantatsika avy amin'izao tontolo izao dia tsy ny antony mihitsy fa noforonin'ny zavatra / olona iray, noho izany ny fitsipiky ny causality momba azy ireo. Mety tsy mila antony ny zavatra hafa. Ny zavatra eto amin'izao tontolo izao dia noforonina tamin'ny famoronana, ary amin'izy ireo ny fitsipiky ny causality dia mihatra na oviana na oviana. Ankoatra izany, na dia eto amin'izao tontolo izao aza ny fitsipiky ny causality dia tsy vokatry ny fandinihana tsotra fa ny fiheverana a priori. Noho izany dia tsy misy sakana amin'ny fampiharana azy amin'ny toe-javatra / fotoana hafa koa.
P. Namaly 4 taona lasa izay
Avy amin'ny ampahany faharoa amin'ny valiny dia azoko fa priori (izany hoe miankina amin'ny fahatsiarovan-tena) ary zava-misy alohan'ny fahatsiarovan'ny olombelona ..
Izany hoe ny zavatra rehetra miankina amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny olombelona dia tafiditra ao anatin'ny causality fa izay rehetra teo aloha dia tsy tafiditra ao anatin'ny causality.
Araka izany dia tsy azoko ny porofo.
Michi Staff	Namaly 4 taona lasa izay
Sarotra amiko ny miresaka elanelam-potoana toy izany. Tsy azonareo tsara aho. Tsy miady hevitra aho fa ny fitsipiky ny causality dia subjective. Ny hevitro dia hoe tanjona izany, saingy mahakasika ny zavatra niainantsika fa tsy ny zavatra hafa. Fa raha ny amin’ny zavatra iainantsika dia marina ny mihatra na dia talohan’ny nisian’ny olombelona sy talohan’ny nahariana izao tontolo izao aza (na ny marimarina kokoa: momba ny fotoan’ny famoronana mihitsy). Ny nolazaiko dia tsy avy amin'ny fandinihana no ipoiran'ny principe de causality fa avy amin'ny antony priori, saingy tsy mifanohitra amin'izany ny momba ny zavatra ara-materialy (izay efa niainantsika) fa tsy ny zavatra rehetra.
די Namaly 4 taona lasa izay
Araka ny voalazan'ny raby ny fototra dia avy amin'ny fandinihana ivelany ny hevitra momba ny antony na zavatra toy izany.
Iza àry no namorona azy? 🙂
Ilay namorona ny zava-drehetra
Shonra ilay mpanao dia lavitra Namaly 4 taona lasa izay
Raha noforonina toy izany fotsiny izao tontolo izao tsy misy antony, nahoana no tsy mitranga izany na dia ankehitriny aza?
Oops, nandeha teo amin'ny klavier indray aho ary nahazo valiny.
Miarahaba, Shunra Katolovsky
vahaolana On Fikambanana mpanavakavaka ve ny Lehavah? (Tsanganana 484)
Mety hanitsakitsaka ihany koa ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-tsaina (ho an'ny rain'ny zazavavy) On Fikambanana mpanavakavaka ve ny Lehavah? (Tsanganana 484)
mikyab On Fikambanana mpanavakavaka ve ny Lehavah? (Tsanganana 484)
Ary izao izy dia ho JG On Valiny ny fifidianana